I-Apple isungule iApple Pay eIndiya ngaphambili kunokuba bekulindelekile Ndisuka mac
Ngamanye amaxesha iApple iza kwintengiso mva kunokuba bekulindelwe ukubonelela ngento ethile, imveliso, okanye inkonzo. Ngamanye amaxesha wayedlala kakuhle ngakumbi xa imveliso entsha ibonelela ngeempawu kude kube ngoku zazingafumaneki, ezinje ngee-AirPods kunye neprosesa yangaphakathi. Kodwa hayi rhoqo.
Kwiinyanga ezidlulileyo, itekhnoloji yokuhlawula i-smartphone iye yaxhaphaka ngakumbi eIndiya, yenye yeemarike ezisakhasayo apho iApple igxile kwimizamo yayo kule minyaka idlulileyo nalapho iceba ukuvula khona iiVenkile zeApple zokuqala, iivenkile ezinyanzelekileyo ukuba zenze utyalomali olukhulu elizweni ukuze zifumane imvume kurhulumente.
U-Eddy Cue wayekwilizwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye kolunye udliwanondlebe awalunikayo, watsho U-Apple wayezama ukufumana eyona ndlela ikhawulezayo yokuqalisa inkonzo yeentlawulo zombane kwilizwe ngokukhawuleza. Kubonakala ngathi inkonzo yokuqala eya kuyivumela iya kuba yi-Paytm, inkonzo yokuhlawula eshukumayo exhaphake kwilizwe. Ukongeza, iya kuyenza nakwiibhanki eziphambili zeli lizwe, ikuvumela ukuba udibanise amakhadi akho etyala ukuze ukwazi ukuthenga rhoqo.
Oko iNkulumbuso yase-India yaqala ukukhupha imali engamaphepha ngexabiso eliphezulu kakhulu, Intengiselwano yedijithali kweli lizwe inamava okonyuka okukhulu. Zonke iinkampani ziye zatsiba kwi-bandwagon yentlawulo yedijithali ukuzama ukuphumelela iqhekeza lepayi. UGoogle wayengomnye wabokuqala ukumilisela iTez, isicelo sentlawulo eshukumayo elawula ngayo ukwenza imali kwinani elikhulu lezentengiselwano ezenziwa kwilizwe.
Ngembangi yayo ephezulu esele isebenza elizweni, iApple ayifuni ukuchitha ixesha kwaye ifike kwimakethi yaseIndiya ngokukhawuleza, kwimakethi apho I-iPhone iye yaba yenye yeefowuni ezithandwa kakhulu kwintengiso, nangona ixabiso layo eliphezulu. Isamsung ikwasebenzisa inkqubo yokuhlawula i-Samsung Pay iinyanga ezimbalwa, ke iApple kufuneka ikhawuleze ikwazi ukwanelisa abasebenzisi bezixhobo zayo eziphathwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple isungule iApple Pay eIndiya ngaphambili kunokuba bekulindelwe
Ividiyo yakutshanje yeApple Park isibonisa iinkundla zebhasikithi zabaqeshwa